China Factory Keychains & orinasa mpamokatra Key Fobs | SJJ
Entana fampiroboroboana lafo vidy. Mihoatra ny 40 style key key Fob endriny & 80 style keychain keychain afaka misafidy, tsy misy fiampangana bobongolo. Ny logo dia mety amin'ny laser amin'ny metaly na pirinty, laser, debossed amin'ny hoditra.
Fitaovana fanalahidy hoditra / Fehin-tànana hoditra
Manana fomba maody maoderina maoderina maody Fob afaka misafidy Fob. Tsy manana fiampangana bobongolo. Azonao atao ny manisy ody vy 1pc miaraka amin'ny logo anao. Ny lakilen'ny hoditra FOB dia afaka atao amin'ny paositry ny polisy. Ampio ny logo an'ny polisy omena ilay polisy. Ary manana maherin'ny 80 keychain hoditra afaka mifidy ianao. Logo dia afaka amin'ny laser amin'ny vy, afaka manonta amin'ny hoditra. Laser amin'ny hoditra. Sary famantarana Debossed amin'ny hoditra. Atambatra ny vy sy ny hoditra, toa avo lenta kokoa. Ho an'ny fanentanana marika marika fiara maro. Ny keychain hoditra dia entana fampiroboroboana lafo vidy.
Fitaovana: hoditra tena izy / PU
Bobongolo: fiampangana fanapahana endrika maimaimpoana ho an'ny endrika sy habe efa misy
Fitaovana: Varahina, varahina, vy, aliminioma, vy tsy misy fangarony, firaka zinc, pewter
Fomba fizahana logo: maty voadona, sary voasokitra, vita pirinty, manary maty, manodina
Loko: Enamelia mafy, enamel henjana sarotra, enamel malemy
Haben'ny endrika & endriny: namboarina
Teo aloha: Mpihinana zava-pisotro Neoprene
Manaraka: Fitaovana vy
Chine keychains vita amin'ny hoditra tsara indrindra
Mpamatsy kofehin-koditra vita amin'ny hoditra tsara indrindra any Sina
China Keychain hoditra sy ny vidin'ny PU Keychain
tompona karatra orinasa hoditra
Fitaovana fanalahidy hoditra
tagy harona vita amin'ny hoditra
Keychains marika marika marika fiara
Fandraisana fitehirizam-bokin'ny mpihady Neoprene